MyLingo101 - Mutauro Kudzidza Platform
Mahara Zvidzidzo uye nezvimwe
Kunyoresa / Saina mukati Tanga Kudzidzisa
Yakarasika Yako password?
DZIDZA MITAURO ITSVA MAZUVA ANO
Kutanga, Pakati kana Pakati. Iwe unowana iye akakwana mudzidzisi!
Languages Chinese, MandarinChirunguFrenchGermanChiGirikiItalianJapanesekoreanPortugueseSpanish
Zvakare Anotaura AfrikaansChinese, MandarinChinese, Yue CantoneseChirunguFrenchGermanChiGirikiHausaHindiHungaryItalianJapaneseChiJavanesekoreanPersianPortugueseRomanianRussianChiSerbo-CrotianSpanishThaiTurkishVietnameseXhosaZulu
Zvidzidzo zvemahara uye ZVIMWE
Wona vedu Vadzidzisi vachipa zveMahara zvidzidzo zveyedzo, Zvidzidzo zveVana, Maitiro Ekukurukurirana, Bvunzo yekugadzirira uye zvimwe zvakawanda ....
MyLingo101 ipuratifomu yekudzidza mitauro yepasirese
Vadzidzisi vedu vanobva kumativi ese epasi izvo zvichave nechokwadi chekuti iwe unogona kuwana yakanakisa yakakodzera mudzidzisi.
Saina kuti uwane MAHARA
Vadzidzisi Vedu VakuruYakakwira-Rated uye International
Iye zvino Vhura
Kutanga kubva pamadhora mazana maviri nemakumi maviri nemaviri
Chamhembe Afrika, Cape Town
Dzidza chiKorea naJulie Mudzidzisi * Native Korean * Dzidziso Yezviitiko * FUn / FUn *
Zvinotaurwa NeVashandisi VeduIsu tinounganidza wongororo kubva kuvashandisi vedu kuti iwe ugone kuwana yakatendeseka pfungwa yekuti chii chiitiko newebhusaiti yedu chinoita chaizvo!
Iyo webhusaiti yakachena uye yakapusa kufamba, iwo mavara akanaka uye anokwezva. Izvo zvidzidzo zvinopihwa zvakare zvinodhura.
Mariana marfuz mudzidzi
Nzvimbo huru! Ini ndango zadza fomu rekubatana nezvandaitsvaga uye vakandiwana ini mudzidzisi akakodzera pasina ini kuita chero kutsvaga ndega
John Smith mudzidzi
"Kuda Mylingo101, zvese zviri muwebhusaiti zviri nyore kuwana uye rutsigiro kubva kuna admin runoshamisa chose. Ndiri kufara kwazvo kudzidzisa pachikuva ichi!"
How akunoita3 Nyore matanho ekuti iwe udzidze pasina kukakavara kana kukurumidza
Sarudza Mudzidzisi wako
Bhurawuza kuburikidza neye runyorwa rweMudzidzisi zvinyorwa uye uwane izvo zvinoenderana newe munguva uye nemutauro zvaunofarira
Bhuku & Bhadhara
Paunenge iwe wawana yako Mudzidzisi ipapo book uye ubhadhare online kuburikidza neyedu yakachengeteka yekubhadhara processor
Iva neChidzidzo chako
Batanidza pamhepo neMudzidzisi wako pazuva uye nenguva yawakatsvaga uye pedzisa chidzidzo chako.
Tarisa yedu yekukurumidza dzidziso nezve maitiro ekutanga
Ngatiitei basa racho iwe!
Hausi kuwana zvauri kutsvaga kana kuti hauna nguva? Hapana dambudziko! Ngatiitei basa racho iwe! Titumire izvo zvaunoda uye isu tinokutumira iwe zvinongedzo kuvadzidzisi zvinonyatso kukodzera zvaunoda.
Tiudze nezve zvaunoda: Ndeapi mhando yezvidzidzo zvauri kutsvaga kuva nazvo? Mutauro upi? Ungada here mudzidzisi weNative kana asiri-weNative? Ndeipi bhajeti yako yekutora zvidzidzo? Kangani uye nenguva ipi yaungade kuva nezvidzidzo?
Titumire izvi zvinodiwa uye isu tichakuwanira iwe mudzidzisi akakwana anoenderana nezvinodiwa.
Pinda udza mashoko pamwe nesu.
Zvikonzero nei uchifanira kudzidza Chirungu
Chirungu ndiyo yeInternational / Global mutauro Chirungu ndiwo mutauro unonyanya kushandiswa pasi rese.
VS. AN: NGUVA YOKUVASHANDISA
Yakanyorwa naScribendi Mhinduro inokurumidza: "A" kana "an"? Uchishandisa "A" Shandisa "a" pamberi pemashoko izvo
MHAKA GUMI DZINONYANYA KUKOSHA KWESL
Yakanyorwa naSchulendi Mazano ekuti ungagadzirisa sei zvakajairika ESL zvikanganiso Ngatipei kiredhiti kupi
Kazhinji Inowanzoshandiswa Chirungu Madimikira nemitsara
Yakanyorwa naJimei Perry Kukurukurirana kungave kunofinha pasina izvi! Kana uchida
Ipuratifomu yakanaka yekudzidza mutauro wesarudzo yako. Tsvaga Mudzidzisi, Bhuka chidzidzo uye uve nenguva inotyisa yekudzidza nesu.
Iva Mubatanidzwa (Hupenyu Hwose Commission)
Maitiro Ekunyoresa uye Bhuku Chidzidzo
© mylingo101.com 2020 Kodzero dzose dzakachengetedzwa.